: at 9/18/2011 05:29:00 PM
Anonymous said... | Sunday, September 18, 2011 6:37:00 PM
ရောဂါကလည်းရနေ အတွက်အချက် ကလည်း မတတ် မတ်ကစ် လည်း နားမလည်
ရွှေစင်ဦး တို့ ပြည်သူ တွေ ဘယ်လိုများလုပ်ရပါ့မလည်း
ကဲ အလှည့် ကျ မနွဲ့ စတမ်းပေါ့
ahphyulay said... | Sunday, September 18, 2011 6:56:00 PM
ဗီဇကတော့ ပါပြီးသား၊ ဗမာပြည်ကလာသူ
တွေဆိုတော့ ၊ ဂတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်ချင်နေတာ၊
မလည်ရှုပ်ပဲဆိုပါတော့ ၊ ကစားလိုက်တဲ့ 
အကွက်တွေလည်းစုံလို့ ၊ တရုပ်ရော၊ကုလား
ရော၊ အဖြူရော.. စုံနေတာလေ၊
နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းတော့ဘယ်သူ ခံလိုက်
( တိုးတိုးလေး...ဖတ်ပါ ) ပြည်သူပဲဗျ..။
ဆိုင်တယ်ထင်လို့လိုရာစွဲရေးတာနော်။
မဆိုင်ရင်လည်း ဂလိုင်မခေါက်နဲ့ တော့ ..။
seesein said... | Sunday, September 18, 2011 7:23:00 PM
ပေသီးခေါက်ချင်လို့ပါ ငယ်တုန်းကတော့ ပေသီးပစ်တာ အမြဲတမ်းနိုင်တယ်ဗျို့
ဖွကိက ငယ်တုန်းကတဲက ပေသီးမခေါက်ဘူးလားးးးး
ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချိန် ၀ယ်လိုက်ပေါ့ ကိုယ်မှ မလုပ်တတ်တာ တန်တယ်လို့အောက်မေ့ပြီး သုံးရတယ်။ ကိုယ်မလိုတဲ့အချိန်ကျမှတော့ အလကားပေးရင်တောင် စဉ်းစားရမယ့် အနေအထားကိုး။ သေချာတာကတော့ လူလည်ကျတာနဲ့ လူရည်လည်တာ ဆိုင်ဘူးနော။ လူလည်ကျတာကတော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါစစ်ပြီးလို့ အဖြေထွက်ရင် ရလာဒ်တွေက အတူတူနေမှာနော.
khin oo may said... | Sunday, September 18, 2011 7:36:00 PM
တရုတ်မြန်မာတော့မဆိုင်ဘူးထင်တယ် ကိရာ. လူပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒီမှာလည်းရှိတာပါဘဲ။ လူကလူပါဘဲ။ ဒါအကြံအဖန်မခေါ်ပါဘူး အဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းသွားကြတာပါ။
တရုပ်တွေ များ တယ်တော်ကြပါ့လား ။... ဆိုတော့၇ွဲံ့ပြောသလိုဘဲ။။ တရုတ်မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်မျိုးတော့ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဒီလိုမျိုး အကြံလေး အဖန်လေး လို့မခေါ်ဆိုသင့်ပါဘူး။ မဆိုင်ဘူးလို့တွေးသွားပါတယ်။
မြန်မာစကားက ခက်တယ်ကိ အပြောမတတ်ရင်ဆဲသလိုဖြစ်သတဲ့။ တို့ကိုခခွင့်လွတ်ပါ။
Anonymous said... | Sunday, September 18, 2011 8:14:00 PM
ဟယ်မယ်ကိ မအယ်လည်း လုပ်ဖူးတယ်။ အိမ်နားက တောဈေးမယ် စတောဘယ်ရီ တခြင်း ၂ကျပ် ၂ခြင်းယူ ၃ကျပ်ဆိုလို့ ဘေးက အမျိုးသမီးနဲ့ တယောက်တခြင်း ယူလိုက်တယ်။ ငါးမူး သက်သာသွားလို့ ပျော်ချက်။
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် said... | Sunday, September 18, 2011 9:58:00 PM
သူတို့ အချင်းချင်းဖေးမကြတယ်ပဲပြောရမလား။ တွက်တာတော်တယ်ပဲပြောရမလားပဲ။ တို့လည်း လိုက်တွက်ကြတာပေါ့။း)
မိုးခါး said... | Sunday, September 18, 2011 11:30:00 PM
အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလိုက်တာပါ .. :D သူတို့ကတော့ ညီတူညီမျှပေါ့ မကိရာ .. ဦးနှောက်ကောင်းကြတာနေမှာ ..
ဦးနှောက် ကောင်းသူချင်းကျတော့ အကျိုးတူပေါ့ .. အထုံအထိုင်းတွေ (ထုံချင်ထိုင်းချင်ယောင်ဆောင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. မဟုတ်လည်း မျက်တောင်တဆုံးကြည့်တတ်တာဖြစ်မယ်) နဲ့ တွေ့ရင်တော့ အထုံအထိုင်းတွေ ခံပေါ့ .. ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံရတာပဲ .. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတာ ဘယ်သူ့ ဂရုစိုက်နေရမှာလဲ .. :P (ဆရာ အော်ပီကျယ်ကာတွန်းမှ စကား ယူသုံးသည် :D)
ကိုကိုးအိမ်(မန္တလေး) said... | Monday, September 19, 2011 3:17:00 AM
အနော်တို့ ဖွကိတို့ ရနေတဲ့ရောဂါက ဧရာဝတီရောဂါလား... အင်း အန်တီဘိုင်အိုးတစ်လေးထုတ်ပေးနိုင်ရင် တော့ ရောဂါများများ တက်နိုင်မှကောင်းမယ်နော်...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Monday, September 19, 2011 11:35:00 AM
တရုတ်အဖွားကြီးတွေ ဥာဏ်ကောင်းသားဘဲနော်။ အဖွားကြီးပေမဲ့ အထင်မသေးနဲ့လို့ ပြောရမယ်။
တရုတ်တွေ တော်လို့ ကျွန်မတို့ပြည်ကြီးက ဘဘကြီးတို့တွေ တရုတ်ကိုဘဲ အားကိုးအားထားလုပ်နေရတာ ကြည့်ပါလားနော်။ အဲဒါကြောင့် အခုဆို အတွက်အချက်တောင် တော်လာပြီ။
မဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ သုံးမကုန်ဘူးတို့.. ဘာတို့တွေပြောတတ်လာပြီး)
An Asian Tour Operator said... | Monday, September 19, 2011 12:29:00 PM
တရုတ်တွေ တော်တာ ကတော့ ငြင်းလို့ မရနိုင်တဲ့ အချက်ပါ။ သူများ အပေါ် လာ "တော်" တာကို တော့ ဂရုစိုက် ရမှာပေါ့။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဗမာဝန်မင်း တွေတောင် တရုတ်လုပ် မော်ဒယ် မြင့်တွေ စီးနေတယ်ကြားတယ် :P
မြသွေးနီ said... | Tuesday, September 20, 2011 11:37:00 AM
Discountနဲ့သာ မျှားထားကြတာ တကယ်က ဈေးတင်ပြီးမှ Discountချတာမျိုး။ လူတွေရဲ့ ၀ယ်ယူဖို့ တုန့်နှေးနေတတ်တဲ့ စိတ်ကို အသုံးချထားတာ။ ကိုယ်တွေလည်း သိရက်နဲ့ Discount ဆို သွား.. သွှား..မွှမိတတ်တယ်...။ တရုတ်အဖွားနှစ်ယောက်လိုချင်တာကို ရအောင်ယူသွားပုံကို သဘောကျပြီး ပြုံးမိတယ်။
ကိုဇော် said... | Tuesday, September 20, 2011 2:54:00 PM
ဒါမှ ဒို့ ရုတ်ရုတ်ကွ . . .
တွေ့သမျှ နေရာကနေ ရသမျှကို ညှစ်ပလိုက်စမ်း။
လွတ်ရင် လွတ် ၊ မလွတ်ရင်တော့ ....ဟွင်း။
လသာည said... | Tuesday, September 20, 2011 11:15:00 PM
သတို့က (သူတို့က) သတို့တိုင်းပြည်မှာ မွေးလာတဲ့သူတွေဆိုတော့ သတို့လူမျိုးတွေအကြောကို နောကြေနေမှာကိုး :D
Anonymous said... | Wednesday, September 21, 2011 3:23:00 AM
ကံကောင်းတာဘဲ ဒို့ များ ခုလို တွဲယူဖို့ အဖော်စပ်ရင် ဒီလို ဘယ်တော့မှ မကြုံကြိုက်လို့ မကြိုက်လဲ ယူနေ ရတယ်
...အလင်းစက်များ said... | Wednesday, September 21, 2011 10:15:00 PM
ဟွန်းဟွန်း ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ် ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်....တဲ့အစ်မ ကိရေ။
ကျနော့ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တရုတ်ပဲ ဒါပေမယ့် မြန်မာသွေးပါတော့ ဟီး..... သူကျ လက်ဖွာထှာ။ ကိုယ်က တားယူရတယ်။ အဲ့ စီးပွားရေး အကွက်မြင်တာကျ ဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို့ ကို မရဘူးဗျိုး။